असोज १०, २०७६
हामीले आफ्नो शरीरको ख्याल हरेक समय गर्नैपर्छ । चिसो होस या गर्मी मौसममा हामी दैनिक गर्ने हरेक क्रियाकलापअनुसार मानवशरीरमा विभिन्न खाले प्रभाव परिरहेको छ ।
हाम्रो शरीरमा पानीसँगको सँसर्गमा पनि शरीमा असर देखिने गर्छ लामो समय पानीमा खेल्दा होस्, नुहाउँदा होस् वा लुगा धोएपछि हाम्रो शरिरको केही हिस्साको छाला खुम्चिने गर्छ । हात, हत्केला, औलाको छाला, गोडाको छाला धेरै बेर पानीमा रहँदा खुम्चेर चाउरिएजस्तो देखिन्छ ।
यसका केही वैज्ञानिक कारण छन् । बायोकेमिकल प्रतिक्रियाको कारण यस्तो हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । चिकित्सकहरुकाअनुसार पानीमा रहँदा हाम्रो छालाबाट सामान्य भन्दा अधिक कोष बाहिर निस्कन्छन् । जसले गर्दा छाला खुम्चिन पुग्छ ।
एजेन्सीहरुमा उल्लेख भएअनुसार छालाको जुन हिस्सा चाउरी पर्नु भने स्नायू प्रणाली ठिक भएको ठहरिन्छ । त्यहाँको केही नसा काटिदिने हो भने त्यसरी चाउरी नपर्ने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ ।
अमेरिकी वैज्ञानिक मार्क चाञ्गिजी भन्छन्, हाम्रो शरीर बदलिएको वातावरण अनुसार आफुलाई पनि सजिलै परिवर्तन गर्नसक्छ ।
सन् २०११ मा मार्केले एक अनुसन्धानको क्रममा यस्तो विशेषता बाँदरमा पनि भेटेका थिए । यसको एउटै अर्थ हुन्छ कि पानीमा हाम्रो पकड बलियो होस् । ब्रिटेनमा सन् २०१३ मा भएको एक प्रयोगले पनि भिजेको हातले पानी भित्र चीजहरुलाई यता उता छिटो सार्न सकिन्छ र सुख्खा हातले यहि काम गर्न बढी समय लाग्ने बताउँछ ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिम कति, कसरी बच्ने ? य...
ख्याल गर्नुस् चुम्बन गर्दा सर्न सक्छन् यी रोग
महाभारतमा दुईपटक भयो अर्जुनको मृत्यु, पहिलोपटक कस...
बुद्ध एयरले राजविराज-काठमाडौँ उडान गर्ने
गण्डकी प्रदेशमा किन घटे पर्यटक ?
कालापत्थरमा फेशन शो, कायम भयो विश्व कीर्तिमान
भक्तपुर ट्राफिक भवनकाे उद्‍घाटन, अपराधिविरुद्ध कठाेर बन्न आईजीपीकाे निर्देशन
घरवासलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ :उपसभामुख शर्मा
सीके राउत भन्छन्, ‘नेकपा, कांग्रेस र मधेसी दल म्याद गुज्रेका औषधि’
ललितपुर र काभ्रेमा राजनीतिक संरक्षणमै क्रसर उद्योग चलेका छन् : सांसद श्रेष्ठ
कांग्रेस विवादको मध्यमार्गी समाधान - फर्किए विधानका निलम्बित धाराहरू !
अपांगतामैत्री प्रदेश बनाउने मुख्यमन्त्री राईकाे घाेषणा